Ginea: Ny Teknolojia Vaovao, Vintana Ho An’ireo Fiteny Ao Amin’ny Firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2016 16:03 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, English, English, Español, عربي, Français
Tasfir Baldé – Alàlana avy aminy
Tao amin'ny tanibe Afrikàna, tena taonany tanteraka mihitsy ny 2015 sy 2016 raha fifidianana no resahana. Nandritra ireo taona ireo, fifidianana 14 no efa nisy hatramin'izao.
Mba hahafahan'ny vahoaka hisitraka feno ny zony maha-olompirenena azy ireo, nohamaroin'ireo mpisera amin'ny aterineto ny fandraisana andraikitra nataony. Tao Ginea, izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny 65 % amin'ny mponina, niaraka amin'ny famatsiambolan'ny OSIWA (Open Society Initiative for West Africa), natomboky ny fikambanan'ireo bilaogera ao Ginea (ABLOGUI) ny fanentanana iray ho fampahafantarana sy hiadiana amin'ny fampiasàna ny tsy fitoviana ara-poko ho toy ny fandaharanasa politika, mba hisorohana ny fifandonana eny anivon'ny vahoaka.
Nangatahan'ny Global Voices Atoa. Tafsir Baldé, tomponandraikitry ny kaomisiona Fampiroboroboana ireo fiteny ao amin'ny firenena, avy amin'ny fikambanan'ireo biloagera ao Ginea, mba hanome ny fihetsehampony momba io.
Global Voices GV: Atoa. Tafsir Baldé, afaka mamerina ny momba anao ho an'ireo mpamaky antsika ve ianao?
Tafsir Baldé TB: Tafsir Baldé no anarako, mpikaroka momba ny teny sy ny kolontsaina no sady bilaogera amin'ny fiteny #Pulaar ao amin'ny www.misiide.net, mpikambana mpanorina ny Fikambanan'ireo Bilaogera eto Ginea (ABLOGUI), ary tomponandraikitry ny kaomisiona Fampiroboroboana ireo fiteny ato amin'ny firenena eo anivon'io fikambanana io.
GV: Inona ilay tenifotora #GuineeVote? Ary inona no fifandraisany amin'ny fiteny eto amin'ny firenena: ny #Pulaar sy ny #Nko?
Ity ambany ity ny lahatsary manazava ilay tetikasa #GuineeVote [fr]:
TB: sehatra ifandrimbonana ety anaty tranonkala ny #GuineeVote, manodidina ny resaka fifidianana ao Ginea. Fandraisan'andraikitra avy amin'olontsotra notohanan'ny Fikambanan'ireo Bilaogera ao Ginea (ABLOGUI). Ao amin'io sehatra io, misy tsanganan-dahatsoratra noforonina ho an'ireo fiteny ao amin'ny firenena mba handikàna ireo zavadehibe momba ny fifidianana ho amin'ny fiteny #Pulaar sy #Malinké.
Hatramin'ny niforonany, ny fikambananay dia nametraka ho tanjona fototra ny hahazoana mirotsaka amin'ny fomba fanaon'ireo mpitarika antoko politika. Mba hanatrarana izay tanjona izay sy handehanana lavidavitra kokoa mihoatra noho ny fironana rehetra, noheverinay fa nilaina ny manavao ny kabary politika, amin'ny fanosehana ireo mpirotsaka mba hiteny ny fandaharanasan'izy ireo fa tsy resaka manana endrika foko. Araka izany dia nametraka izahay rafitra iray hampitahàna ny fandaharanasan-dry zareo, ary mba hahafahan'ny ankamaroan'ny vahoaka hanakatra azy ireny, izay betsaka no tsy mahay ny teny frantsay dia nampidirinay io ampahany mampiasa ireo fiteny eo amin'ny firenena io.
Araka izany dia nandika sy namoaka tamin'ireo teny roa ireo tao amin'ny www.guineevote.com ny kaomisiona ato aminay natokana ho an'ireo fiteny ao amin'ny firenena, manazava ny fitsipika mifehy ny fifidianana, ny maha-zavadehibe ny vatom-pifidianana, ny asan'ireo olomboafidy, ny fampitahàna ireo fandaharanasan'ireo mpirotsaka samihafa sns…
GV: Inona avy ny vokatra azo?
TB: Niavaka mihitsy ny vokatra azonay. Voalohany, afa-po ireo mpamaky satria niaraka tamin'ny famoahana vaovao amin ‘ireo fiteny roa ireo, afaka nanakatra misimisy kokoa ny dingam-pifidianana sy ny lanjany amin'ny fiainan'ny Gineana tsirairay izy ireo. Hoy ny mpamaky iray nanoratra ho anay tamin'ny fanehoankevitra amin'ny fiteny Pulaar: “A weltaanama seydi Balde! Golle maa ɗen no labaa fota” (dika: Mampirehareha anay ny asa miavaka vitanao, Atoa Baldé). Tsy adino koa ny milaza ny fanatsarànay tamin'ny alàlan'io tetikasa io ny fahitàna ireo fiteny ao amin'ny firenenay.
GV: Mahafantatra fandraisana andraikitra hafa koa ve ianao ampiasàna ireo fiteny ao amin'ny firenena mba ho fandraisana anjaran'ireo bilaogera, any Afrika Andrefana?
TB: Raha ny momba ny fandraisana anjaran'ireo biloagera, ankoatry ny fandraisana andraikitra ataonay, tsy mahafantatra hetsika hafa amin'io karazany io aho aty amin'ny vakim-paritra! Kanefa, fahitalavitra marobe, fa indrindra ireo fampielezampeo mandefa amin'ireo fiteny ao amin'ny firenena, no afaka jerena ety anaty aterineto.
Tsy maintsy marihana ihany koa fa ao anatin'ny fandraisana anjara demaokratika mivelatra kokoa, vao avy nadikan'i Burkina Fasso ihany koa ho amin'ireo fiteny tena miasa ao amin'ny fireneny ny fitsipika mifehy ny fifidianany. Etsy ankilany, tamin'ny 2014, natsofoky ny antenimieram-pirenena ny mety hahafahan'ireo parlemantera handray fitenenana amin'ireo fiteny enina ao amin'ny fireneny rehefa ao amin'ny antenimiera.
Ireny no ohatra tokony ho arahana mba hahafahan'ny olona hifantoka tsara sy haneho ny hevitr'izy ireo.
GV: Inona no hitanareo ho sàkana amin'ny fampiasàna betsaka ireo teknolojia vaovaon'ny fampitambaovao sy ny fifandraisana (NTIC) ao anatin'ireo dingam-pifidianana ao Ginea sy any amin'ny vakim-paritra?
TB: Tsy mantsy asongadina fa afaka ny ho fitaovana mahomby amin'ny fanapariahana ireo fiteninay ny NTIC. Nisy ny fandrosoana lehibe vita amin'izay lafiny izay ho an'ny pular sy ny n’ko. Heveriko fa tsy mitondra mankaiza loatra ny famerana ireny hetsiky ny olompirenena ireny ho amin'ny fiteny frantsay monja! Satria araka ny antontanisa, manodidina ny 65% amin'ny vahoaka Gineana no tsy mahazo akory izay lazaina amin'io fiteny ofisialy io sy ireo andrim-panjakana rehetra. Araka izany dia tsy maintsy hatao izay handraisana izany ho ao anatin'ny kajikajin'ny rafitra fampitambaovao izay apetrakay bilaogera ; mba tsy hahatsiaro ho natao anjorom-bàla izy ireo satria tsy mahatakatra na mahay kely fotsiny ny teny frantsay.
Tsy manohitra mihitsy ny fampiasàna ny teny frantsay izahay, saingy kosa noraisinay ny andraikitra mavesatra fampahafantarana ireo mpamaky an'aliny amin'ny fitenin'izy ireo tsirairay avy.
GV: Ahoana no fahitànareo ny hoavin'ny fampiasàna ireny fiteny ao amin'ny firenena ireny eny anatin'ny tambajotra sosialy?
TB: Ny fanadihadiana iray notontosain'i Gilles Maurice de Schryver sy Anneleen Van der Veken, nanamafy taminay hoe nihoatra lavitra noho ny nanaovana azy ho fianarana fotsiny tety anaty tranonkala ireny fiteny ireny.
Amin'ny fomba roa miavaka no ahitàna ireo teny Afrikàna ao amin'ny tambajotra sosialy. Ny fomba voalohany dia voamarik'ireo tenifototra momba ireo lohahevitry ny vaovao mafana ao amin'ny firenena na manondro singa aminà fitenim-paritra. Izany ohatra no mitranga amin'ny #lwili (amin'ny fiteny mooré, iray amin'ireo fiteny tena miasa ao Burkina Faso), izay manao sarinteny amin'ny salàka fampiasa ao amin'ny firenena, ny lwili-peendé; nitafiana hatrany amin'ny vanim-potoan'ny fanjanahana
Mazava ho azy fa maneho ny endrika rehetran'ilay vornonkely marika ahafantarana ny Twitter io tenifototra io. Sady koa, ao anatin'ny kolontsaina ivoariana momba ny tambajotra sosialy, ny fomba fiteny hoe « #Kpakpatoya » (amin'ny fiteny nouchi) dia mampiseho ny zavamisy ao amin'ny firenena na iraisampirenena mety hahaliana ireo mpanaraka ilay rohim-baovao. Izahay bilaogera ao Ginea, dia eo an-dàlana amin'ny fikarohana tenifototra iray amin'ireny firenena ao amin'ny vakim-paritra ireny.
Ny fomba faharoa dia miavaka amin'ny fampidirana ireo teny afrikàna ho eny anaty tambajotra sosialy mba ho toy ny teny ampiasain'ireo mpampiasa. Mitombo hatrany manome toerana ny teny afrikàna ireo tena mpisehatra amin'ny tambajotra sosialy sy ireo loharanonà tondrozotra.
GV: Tena mpisehatra iza no lazainao? Azonao asehoanay ve ny zavatra ataon'izy ireo?
TB: Wikipédia, ohatra, manome votoaty aminà fiteny afrikàna vitsivitsy, isan'ireny ny peul sy ny bambara, fiteny tena manakaiky ny malinké. Ankoatra izay, niteraka ny Afripedia io loharanonà votoaty io, niarahana niasa tamin'ny Institut français sy ny ‘Agence universitaire de la Francophonie’ hatramin'ny Jona 2012.
Na tsy izay aza no tanjony voalohany, ny tetikasa Afripédia mikendry ny hanome vàhana ny hahafahan'ireo mpampiasa marobe tsy manana fifandraisana aterineto mba ho afaka miditra amin'ireo votoaty ao amin'ny tambajotra, dia mety ihany koa ho afaka mandray anjara amin'ny fampiasàna bebe kokoa ny fiteny afrikàna amin'ny NTIC.
Taorian'ny tamazight tamin'ny 2013, ho toy ny teny fampiasàna azy dia nandray fiteny afrikàna 10 hafa ny Facebook ho ao amin'ny tambajotra sosialiny. Ho ahy manokana, niditra nanatevina laharana ireo mpandika ny Facebook ho amin'ny fiteny pular aho. Araka ny lazain'ny tarika miandraikitra ny fijerena ny asanay antsoina hoe “Facebook Translations Team”, 85% amin'ilay tambajotra no efa voadikanay ho amin'ny fiteny pular.
Aoka ho marihana fa hatramin'ny 2014, nisy tanora afrikàna nifofotra hamorona tambajotra sosialy tena afrikàna fotsiny tsy misy fangaro. Toy izany ohatra ny « #Ilemba » (marika Gaboney) mipetraka ao Libreville.
Nanatsara ny fahitàna ireo fiteny afrikàna tety anaty tambajotra sosialy ireny lafin-javatra rehetra ireny.
GV: Ahoana no ho fanarahanareo ny tohiny aorian'ireo fotoana nifamatotra tamin'ny fifidianana, mba hampiroboroboana ny fampiasàna ireo fiteny roa ireo eny anivon'ireo gineana mpisera amin'ny aterineto?
TB: Ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ireo tena hetsika ho ataonay ny taona 2016, mihevitra ny hikarakara kaonferansa iray izahay hifanakalozana hevitra momba ny toeran'ireo fiteny eto amin'ny firenena eny anatin'ny NTIC. Kendrena amin'ilay fihaonana ny hanome lanja ny fampiasàna ireo fiteny eo amin'ny firenena any anatn'ireo teknolojia vaovao. Mandritra io kaonferansa fifanakalozana hevitra io, ho asianay tsindrimpeo ireo fanavozana teknolojika amin'ny fiteny eo an-toerana mba hanentanana ny olompirenena sy ny fanjakàna hampiasa ireny fitaovana ety anaty tranonkala ireny hiadiana amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ao amin'ny firenenay.
GV: Ny teninao farany?
TB: Manasa ny namako bilaogera rehetra aho, mba handray ny fiteny afrikàna ho ao anatin'ny hetsika fitorahan'izy ireo bilaogy. Tanjona iray ihany no tiana hahatongavana amin'izany, fampiroboroboana ny fanapariahana ireo fiteny afrikàna amin'ny alàlan'ny fitaovana web 2.0.